Alcocebre - Costa Azahar - Nharaunda yeValencia - Spain
Iri idhorobha riri mumahombekombe munharaunda yeValencian iri paCosta del Azahar pamwe nemhenderekedzo yekumabvazuva kweMediterranean yeSpain mudunhu reCastelló. Iri taundi rakagadzirwa mukati mematunhu emakanzuru eAlcalá de Xivert pamwe chete neCapicorb neLes Fonts dzakavakidzana.
Pakati pemakiromita gumi eAlcossebre pamhenderekedzo yegungwa pane mahombekombe mana makuru: Carregador, El Romà, El Moro neManyetes (kana Tropicana), iyo yekupedzisira yakagovana neCapicorb, iyo ine Blue Flag sechiratidzo chehunhu. Kune mamwe matatu ma coves: Tres Platges (matatu emabhichi), seti yemabays matatu akapatsanurwa nematombo mafomu ayo mubhedha idombo, Cala del Moro, iyo yakaparadzaniswa kubva kumahombekombe ezita rimwe chete ne dune diki uye Cala Blanca iri pedyo neimba yechiedza.
Les Fonts (Las Fuentes) pamhenderekedzo ndeimwe yevakashanyirwa zvakanyanya. Iine hurefu hwe360 metres uye hupamhi hwe32 metres. Kune mamwe manyuko emvura nyowani anotubuka kubva kune yekutanga jecha rekarst system yeSierra de Irta.
Iwo maColumbretes Islands ari kure nemahombekombe uye anogona kuoneka ari kure mune yakanaka mamiriro ekunze.
Yedu yekupa muAlcocebre
Tsvaga Alcocebre uye nhoroondo yayo
Zvaunofanira kuona muCastellón: Nzvimbo gumi dzausingakwanise kupotsa mudunhu.
22/09/2021 Maitiro ekudhawunirodha pasipoti yeCovid muValencian Nharaunda Kubva yekupedzisira 1 ya